Maamulka gobolka Banaadir oo iibiyay dhulkii danta guud iyo lacagtaas oo doorasho lagu galay (CADDEYN) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka gobolka Banaadir oo iibiyay dhulkii danta guud iyo lacagtaas oo doorasho lagu galay (CADDEYN)
Warbaahinta Bulshoweyn ayaa soo heshay Documenti caddeeynaya in dhulkii danta guud ee ku yaalay galbeedka fagaaraha Tarabuunka degmada Hodan ee magaalada Muqdisho la iibiyay kadibna lagu galay doorashadii dhismaha maamulka Hirshabeele.
Dhulkaan oo ku yaala inta u dhaxeeya fagaaraha Tarabuunka iyo Isbitaalka Digfeer ayaa ka kooban ilaa 128 boos, oo midkiiba cabirkiisu yahay 20x15m.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa la sheegayaa inuu dhulkaasi ka iibiyay dad ganacsato ah iyo dad kale oo sheegtay inay degan yihiin dhulkaas danta guud ahaa, waxaana lacagta kasoo xarooday la sheegay inay ka badan tahay $ 2,000,000 (Laba Milyan Doolar).
Si kastaba, muddooyinkii ugu dambeysay maamulka gobolka Banaadir wuxuu kaalin weyn kulahaa lacagaha lagu bixinaayo laaluushka doorashada, waxaana si weyn looga dareemay doorashadii Hirshabeele, iyo xubnaha labada Aqal ee lagu doortay magaalada Jowhar.
Hoos ka aqriso warqada uu guddoomiyaha gobolka Banaadir ku amray in la iibiyo dhulkaasi